Cameron.....: October 2021
တစ်ခါတုန်းက ကျွန်မ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် (၅)မျိုးအကြောင်း ပို့စ်တင်ခဲ့ဖူးတာကို မှတ်မိကြမယ်ထင်ပါတယ်....။ ဒီလိုတင်ဖြစ်ရင်း အဲဒီတုန်းကတည်းက ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဘယ်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ထဲမှာပါလဲလို့ စမ်းစစ်ခဲ့ဖူးတယ်...။
၁) ကုလဗုဒ္ဓဘာသာ (မိရိုးဖလာဗုဒ္ဓဘာသာ)
၂) လာဘဗုဒ္ဓဘာသာ (လာဘ်လာဘလိုလို့ကိုးကွယ်သော ဗုဒ္ဓဘာသာ)
၃) ဘယဗုဒ္ဓဘာသာ (ကြောက်လို့ ကိုးကွယ်သော ဗုဒ္ဓဘာသာ)
၄) သဒ္ဒါဓိကဗုဒ္ဓဘာသာ (ယုံကြည်လို့ကိုးကွယ်သော ဗုဒ္ဓဘာသာ)
၅) ပညာဓိကဗုဒ္ဓဘာသာ (သစ္စာတရားကိုသေချာသိသော ဗုဒ္ဓဘာသာ)
နံပါတ်(၂) နဲ့ (၃) မှာနှစ်တော်တော်ကြာဖြစ်ဖူးခဲ့လိမ့်မယ်လို့ ထင်ပေမယ့် နံပါတ်(၁) မိရိုးဖလာဗုဒ္ဓဘာသာ မဟုတ်ခဲ့တာတော့သေချာတယ်....။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ကျွန်မကြီးပြင်းခဲ့ရတဲ့ အမေဖက်က အဖိုးအဖွားတွေဟာ ဗီယက်နမ်လူမျိုး ကွန်မြူနစ်လက်အောက်ခံကနေ ဆင်းသက်လာခဲ့ကြသူတွေဖြစ်နေလို့ပါပဲ....။ ဆိုတော့ သူတို့ရဲ့ထုံးတမ်းစဉ်ဆက် ကိုးကွယ်တာတော့ တရုတ်လူမျိုးတွေနဲ့တော်တော်ဆင်တူပါတယ်...။ တရုတ်နှစ်ကူးလုပ်တာ ဘိုးဘွားကန်တော့တာတွေပေါ့....။ အဖွားက စစ်ဖြစ်တဲ့ခေတ်က ဟောင်ကောင်မှာ နေခဲ့ဖူးတော့ အဲကတရုတ်ထုံးစံတွေလုပ်တာများတယ် ငယ်ငယ်တုန်းက အိမ်အလယ်ခေါင် တိုင်အောက်ခြေနားမှာ မုတ်ဆိတ်မွှေးနဲ့တောင်ဝှေးနဲ့ မြေစောင့်နတ်ရုပ်နတ်ကွန်းလေးထားထားတာ မှတ်မိတယ်....။ နေ့တိုင်းရေနွေးကြမ်းကပ် အမွှေးတိုင်ထွန်း သစ်သီးကပ်ပေးတာလုပ်တယ်...။ သီတင်းကျွတ်ခါနီး လကန်တော့တာတွေလုပ်တယ်...။ ငယ်ငယ်က လကန်တော့ပြီးရင် လမုန့်တွေ ဆန်မုန့်တွေအစုံစားရတာ အဲလိုချိန်ဆို သိပ်ပျော်တယ် တစ်နှစ်မှတစ်ခါစားရတာကိုး....။
အိမ်မှာ ဘုရားကျောင်းဆောင်ထားတာ ဘယ်ချိန်ကစထားမှန်းသေချာမသိပေမယ့် ကျွန်မလူမှန်းသိခါစအရွယ်မှာတော့ အိမ့်အပေါ်ထပ်မှာ ရှေးဟောင်းအရောင်မဲမဲနဲ့ ဘုရားဆင်းတုတော်တွေအစုံ ပူဇော်ထားတဲ့ ဘုရားစင်တော့ရှိတယ်....။ အဖိုးက ရှေးဟောင်းပစ္စည်းစုဆောင်းရောင်းဝယ်တာ ဝါသနာပါတဲ့သူ...။ ဘုရားဆင်းတုတော် ရုပ်ပွားတော်တစ်ဆူဟာ သူတို့အတွက်တော့ ဗုဒ္ဓရဲ့တရားဒေတနာတော်ကို နားလည်လို့ ယုံကြည်ဆည်းကပ်ကိုးကွယ်ခဲ့တာမျိုးထက် ရုပ်တုတစ်ရုပ်အဖြစ်က ဘာမှမပိုခဲ့ဘူးလို့ ကျွန်မထင်မြင်ယူဆမိတယ်...။
ဆိုတော့ အခုပစ္စုပ္ပန်မှာ ဗုဒ္ဓရဲ့ ဂုဏ်တော် တရားဒေတနာတော်ကို ယုံကြည်စွာ ဆည်းကပ်လိုက်နာကျင့်ကြံခဲ့တာမှာ မိရိုးဖလာကနေ ဆင်းသက်လာခဲ့တဲ့ ကိုးကွယ်မှုတစ်ခုမဟုတ်ဘူးလို့ ကျွန်မမှတ်ယူပါတယ်...။ ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားကို ကြည်ညိုအားထား ယုံကြည်ကိုးစားခဲ့တာတွေဟာ ရှေးဘဝအဆက်ဆက်က ကုသိုလ်ပါရမီကံကြောင့်ဖြစ်လာရတယ်လို့ ကျွန်မယုံကြည်တယ်....။ ငယ်စဉ်က ကျွန်မတို့တက်ခဲ့ရတဲ့ မူလတန်း အလယ်တန်းကျောင်းမှာ ဘယ်ဆရာ ဆရာမကမှ ဘုရားရှိခိုးမသင်ပေးခဲ့ဘူး....။ ကျွန်မမှတ်မိသလောက်တော့ ကျွန်မရဲ့အဒေါ်အမွှာအငယ်တစ်ယောက်က မြန်မာလိုဘုရားရှိခိုး စသင်ပေးခဲ့တာ....။ ကျွန်မပထမဆုံးတတ်ခဲ့တဲ့ ဘုရားရှိခိုးက "ဗုဒ္ဓဂုဏော အနန္တော ဓမ္မဂုဏောအနန္တော သံဃဂုဏောအနန္တော" ဆိုတဲ့ ရတနာသုံးပါး ဂုဏ်တော်အတိုလေးပါပဲ....။ အဒေါ်က ညအိပ်ရာဝင်ရင် ဒါလေးရွတ်ပြီး ဘုရားကန်တော့ ဦးချပြီးမှအိပ်နော်လို့ သင်ပေးခဲ့ဖူးတာ.....။ ဒီနေ့ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်စစ်စစ်တစ်ယောက်ဖြစ်လာဖို့ အဦးဆုံးတွန်းအားပေးခဲ့တဲ့ အစ စပေးခဲ့တဲ့ အဒေါ်ရဲ့ ကျေးဇူးကိုမမေ့ပါဘူး....အခွင့်သာတိုင်းလဲဆပ်ပါတယ်....။
အဲဒီတုန်းက ဩကာသရွတ်ရတာတွေဘာတွေလည်း နားမလည်သေးဘူး ရှမ်းပြည်မှာဆိုတော့ ရှမ်းဘုန်းကြီးကျောင်းမှာ ဉပုသ်နေ့တိုင်း ကျောင်းမှာသီလယူတဲ့ အဖိုးအဖွားတွေကို ဆွမ်းဟင်းတွေပို့ကြတဲ့ ထုံးဓလေ့လေးရှိတယ်...။ အဲလိုနေ့မျိုးဆို ကျွန်မ သူငယ်ချင်းနန်းဖေါင်းက သူ့အဖိုးနဲ့အဖွားအတွက် မွန်းမတည့်ခင် ထမင်းဟင်းအစုံပါတဲ့ ဗန်းနဲ့သွားပို့ပေးတဲ့အခါ သူနဲ့အမြဲလိုက်နေကျမို့ ရှမ်းဘုရားရှိခိုးနည်းတော့အဲတုန်းက ရွတ်ဖူးခဲ့တယ်....။ ခုတော့ မမှတ်မိတော့ပါဘူး....။ ကျွန်မ ခုနှစ်တန်းနှစ်ကစပြီး ရန်ကုန်ရောက်လာခဲ့တာကိုး....။ ရန်ကုန်ကျောင်းရောက်တော့မှ ကျွန်မတက်ခဲ့တဲ့ လသာ(၂)မိန်းကလေးကျောင်းမှာ နေ့စဉ်ဘုရားရှိခိုးရတယ်...။ ဉပုသ်နေ့မတိုင်ခင် အဖိတ်နေ့ဆို ကျွန်မတို့အတန်းရဲ့ ဘုရားခန်းမှာ ဓမ္မစကြာရွတ်ရတယ်...။ အဲခါကျမှ မြန်မာဘုရားရှိခိုးနည်းကို စသိခဲ့ရတာ...။ ဒါပေမယ့် ဗုဒ္ဓရဲ့အနှစ်သာရကို ကျွန်မသေချာမသိခဲ့သေးဘူး....။ ပတ်ဝန်းကျင်မှာလည်း ဘယ်သူကမှ လမ်းညွှန်ပေးတဲ့သူမရှိခဲ့ဘူး...။ ကိုယ်တိုင်လည်း လေ့လာရကောင်းမှန်းမသိခဲ့ဘူး...။ ဘုရားကို သတိရရင် ရှိခိုးတယ် သတိမရရင် မရှိခိုးဖြစ်ဘူး...။ သတိရတဲ့အချိန်က ကြောက်နေတဲ့အချိန် (အဲဒါဘယဗုဒ္ဓဘာသာ) ...။ ဘာသာတရားကိုလေးလေးနက်နက်လဲမရှိခဲ့ဘူး...။ ဒီလိုနဲ့ ကျောင်းပြီးတဲ့နှစ်မှာပဲ(၂၀၀၂ လို့မှတ်မိတယ်)သူငယ်ချင်းနဲ့အတူ ကမ္ဘာအေးဘုရားလမ်းပေါ်က မဟာစည်သာသနာ့ရိပ်သာမှာ သင်္ကြန်တွင်းကိုးရက် သီလရှင်ဝတ်ခဲ့ဖူးတယ်...။ ဒီတော့မှ ဗုဒ္ဓရဲ့ ဩဝါဒတွေ တရားတော်တွေကို နည်းနည်းစပြီးနားလည်လာခဲ့ရတယ်...။
အဲဒီနှစ်မှာပဲ ကျွန်မအလုပ်စလုပ်ခဲ့တယ်...။ အလုပ်လုပ်ရင်း မှတ်မှတ်ရရ အလုပ်မှာ လာကူပေးတဲ့ အစ်မတစ်ယောက်ဆီကနေ ပရိတ်ကြီး(၁၁)သုတ်စာအုပ် လက်ဆောင်ရခဲ့ဖူးတယ်....။ အဲတုန်းက ညောင်ပင်လေးဈေးမှာ ကျွန်မတို့ ကုမ္ပဏီက Down နို့ဆီ Import သွင်းတော့ ဈေးထဲမှာ ဖြန့်ချီတဲ့ ဒိုင်အနေနဲ့ ဆိုင်ခန်းတစ်ခုငှားပြီး ကျွန်မက အဲဒီမှာ တာဝန်ကျတာ....။ တစ်လကို လစာစရတာ နှစ်သောင်းကျပ်တိတိ...။ ဈေးရောင်းကောင်းအောင်ဆိုပြီး ဘုရားစာတွေဘာတွေရွတ်ဖို့အကြံပေးတော့(လာဘဗုဒ္ဓဘာသာ) ပြီးတော့ ကျွန်မတို့ သဌေးကလဲ စိတ်တိုအအော်အဟောက်ကြမ်းတော့2in 1 ဈေးလဲရောင်းကောင်း သဌေးအအော်လဲမခံရအောင် ပရိတ်ကြီး(၁၁)သုတ်ထဲက မေတ္တာသုတ်ရွတ်လို့ အကူအစ်မက အကြံပေးတာနဲ့ မေတ္တသုတ်တရားတော်ကို အဲတုန်းကစပြီး နှုတ်တိုက်အလွတ်ရွတ်ဆိုနိုင်ခဲ့တယ်...။ အဓိပ္ပါယ်ကို ခုချိန်လို အဲတုန်းက လေးလေးနက်နက်မသိသေးဘူး....။ မေတ္တာသုတ်တရားတော်ကို ရွတ်ဖတ်ရာမှာ အခုသိသလို အပြည့်အစုံဘုရားရှိခိုး ငါးပါးသီလခံယူ နတ်ပင့် မေတ္တာပို့ အမျှဝေ နတ်ပို့ ဒါတွေအသေးစိပ်မသိသေးဘူး...။ မေတ္တာသုတ်ရွတ်ဆို ဒီတိုင်းပဲ ကိုယ်အဆင်ပြေချင်တဲ့သူ မြင်ယောင်ပြီး ရွတ်လိုက်တာပဲရှိတာ...။ ယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့ရွတ်တော့ တကယ်အစွမ်းထက်ပါတယ်...။ အဲလိုချိန်ဆို အရာအရာအဆင်ပြေချောမွေ့နေရော....။ ဒီလိုနဲ့ ကျွန်မကို ထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာဝင်စစ်စစ်တစ်ယောက်ဖြစ်လာစေဖို့ တွန်းအားပေးစေခဲ့တာပဲ....။ ပရိတ်ကြီး(၁၁)သုတ်စာအုပ်ကို လက်ဆောင်ပေးခဲ့တဲ့ အစ်မကိုလဲ မှတ်မိသတိရနေသေးတယ်...။ ဒီပို့စ်ကနေ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်... အစ်မ ကိုယ်ကျန်းမာ စိတ်ချမ်းသာရှိပါစေ....။
တပည့်တော်မဟာ ခုဆိုရင် ယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့ (သဒ္ဓါဓိကဗုဒ္ဓဘာသာ) , သစ္စာတရားလေးပါးကို သေသေချာချာ လေ့လာဆည်းပူးသိမြင်ခဲ့ရတဲ့(ပညာဓိကဗုဒ္ဓဘာသာ) ထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာဝင် စစ်စစ်တစ်ယောက်အဖြစ်ခံယူရင်း အရှင်ဘုရားကျင့်ကြံအားထုတ်လမ်းညွှန် ဟောပြောပြသပေးခဲ့တဲ့အတိုင်း ကြိုးစားလေ့လာသင်ယူကျင့်ကြံရင်း နိဗ္ဗာန်ကိုမြတ်မှောက်ပြုမယ့် တပည့်တော်ကောင်းတစ်ယောက်အဖြစ် ဒီပို့စ်တစ်ပုဒ်နဲ့ ကျေးဇူးတော်ဆပ်ပါရစေ အရှင်မြတ်ဘုရား.......🙏🙏🙏
ပြီးခဲ့တဲ့ အဘိဓမ္မာအခါတော်နေ့ သီတင်းကျွတ်လပြည့်နေမှာ ဉပုသ်သီလဆောက်တည်ရင်း ဒီပို့စ်ကိုရေးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်...။
Posted by Cameron at 09:23 No comments:
Posted by Cameron at 12:16 No comments:
"မိုးတွေရွာနေချိန်ခဏ" ထဲမှာ ကိုမျိုးကျော့ ဖန်တီးထားခဲ့တဲ့ "ဝတ်ရည်" ဟာ Piano သံစဉ်ထည့်ထားတဲ့ ကဗျာတစ်ပုဒ် သို့မဟုတ် ချစ်သူကောင်မလေးအကြောင်းကိုရေးထားတဲ့ အက်ဆေးတစ်ပုဒ်နဲ့တူတယ်.....။ "ဝတ်ရည်" လို့တစ်ခွန်းခေါ်ပြီး အပြီးသတ် အဆုံးပိုဒ်လေးမှာ မြူးဆစ်လေး ဝိုင်းဒိုင်းကြဲထွက်လာတာလေးလဲ သိပ်ကြိုက်တယ်...။
မသိဘူးကွယ်........ အိပ်မက်ဆန် ပုံပြင်ဆန်တာတွေကိုကြိုက်တတ်လို့လား.... ကိုမျိုးကျော့ သီချင်းတွေဆို အကုန်နီးပါးကြိုက်နေတော့လဲ.................... ။
🎵♬ နာမည်လေးကို ဘယ်သူ့မှမကြားအောင် ခေါ်နေမိတယ် တိုးတိုးလေး..........🎵♬ "ဝတ်ရည်"......🎵♬
တစ်ညမှာ အဲသီချင်းနားထောင်ရင်း ကိုမျိုးကျော့သီချင်းတွေကို စနားထောင်ဖူးခဲ့တဲ့ အချိန်တုန်းကအကြောင်းကို သတိရသွားမိတယ်....။ အဲတုန်းက ကျွန်မ တက္ကသိုလ်မတက်ခင်တစ်နှစ်အလို 1995 လောက်ဖြစ်မယ်...။ ကျွန်မက တရုတ်တန်းဖက်က အဒေါ်တို့မိသားစုနဲ့အတူနေကြတာ ....။ ကျွန်မနဲ့ဝမ်းကွဲညီအစ်မတွေက ကျွန်မတို့နေတဲ့အိမ်ရဲ့ မျက်နှာချင်းဆိုင်တိုက်က ကျွန်မထက်နှစ်နှစ်ကြီးတဲ့ အစ်မတစ်ယောက်နဲ့သိပ်ခင်ကြတယ်...။ အဲအစ်မက အဲချိန်တုန်းက တက္ကသိုလ်ကျောင်းသူ သူတို့အိမ်က ငါးဆီပေါင်းလုပ်တာ သူ့မှာအစ်ကိုသုံးယောက်ရှိတယ် သူကအငယ်ဆုံး သူဌေးသမီး အဲခေတ်တုန်းက ဟော့ရှော့ စတိုင်လ်မိမိုက် ကျောင်းတက်တော့လဲ ကိုယ်ပိုင်ကားမောင်းပြီးတက်တော့ ကျောင်းမှာရော လမ်းထဲမှာရော ပေါ်ပြူလာတွေဖြစ်....။ သူ့အစ်ကိုတွေကလဲ သုံးယောက်စလုံးချော ကိုယ်တွေက အဲအိမ်သွားရင်း ငမ်းရ.... ခုတော့လဲ အသက်ငါးဆယ်ကျော် ထိပ်ပြောင် ဗိုက်ရွှဲတွေဖြစ်ကုန်နေပါပြီ....။ ဇရာကိုဘယ်သူအန်တုနိုင်မလဲ....။ အဲအစ်မအိမ်က သုံးထပ်တိုက် သူကနှစ်ထပ်မှာအိပ်တယ် သူ့အိပ်ခန်းကို ကျွန်မတို့ခနခနရောက်ဖူးတယ် အိပ်ရာထဲမှာ အရုပ်တွေအပြည့်နဲ့အိပ်တာ မိချောင်းရုပ် ဖက်ခေါင်းအုံးတို့ ဝက်ဝံရုပ်ကြီးတွေတို့ မီးကီးမောက် မီးနီမောက်တို့ အစုံပါပဲ....။ ကိုယ်တွေက သူ့ကိုအားကျပေါ့ တစ်နေ့ကျရင် ငါ့အိပ်ရာလေးမှာလဲ အဲလိုအရုပ်တွေထားအိပ်မယ်လို့ စိတ်ကူးယဉ်လိုက်သေးတယ်....။ ပြောချင်တာက ကိုမျိုးကျော့ပထမဆုံးခွေအချောမထွက်ခင် New Year Night မှာ ခွေကြမ်းတွေကို အသိမိတ်ဆွေတချို့ဝေပေးခဲ့တယ်....။ ဒီမှာ အဲအစ်မက တစ်ခွေရလာတယ် သူ့ဆီကနေ ကျွန်မတို့က ပြန်ပွားပြီးနားထောင်ရတာ....။ အဲဒီတုန်းက ကျွန်မအမေ အဒေါ်တွေရဲ့သမီး စင်္ကာပူမှာ ကျောင်းတက်တော့ အုပ်ထိန်းသူသွားလုပ်ပေးရတာ ဆယ်နှစ်ကြာတယ် အမေက စလုံးကနေ ကျွန်မအတွက် Sony Walkman လေးဝယ်ပို့ပေးထားတာရှိတယ် အဲဒါလေးနဲ့ ကိုမျိုးကျော့ သီချင်းခွေလေးကို နားထောင်ခဲ့ရတာ... အမှတ်တရပါပဲ...။ အဲဒီအခွေကတော့ "မိုးတွေရွာနေချိန်ခဏ" ပဲဖြစ်ပါတယ်....။
Posted by Cameron at 19:10 No comments:
အမြဲတမ်း လမ်းပြကူညီဖေးမ ကာကွယ်ပေးတတ်သော
ဒီလထဲမှာ ဂြိုလ်သုံးလုံးအလှည့်အပြောင်းဖြစ်သွားခဲ့တာမှာ 7th Oct မှာ Pluto ဟာ အရိပ်ယောင်ထင်ထင်ရှားရှားပြသသွားခဲ့တယ်....။ 12th Oct Saturn 🪐 ရဲ့အလှည့်မှာ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ စိန်ခေါ်မှုတစ်ခု မထင်မှတ်ထားဘဲ ရောက်လာခဲ့တယ်....။ ဒီဂြိုလ်ဟာ ဘောင်ဒရီတွေ သတ်မှတ်ဖို့ အစိုးရဖို့အားပေးတဲ့ဂြိုလ်လို့ Spiritual Friend မှာ ပြောပြထားတယ်...။ ပရမ်းပတာနေချင်တဲ့ ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကို ဆုံးမဖို့ သိက္ခာ သမာဓိရှိဖို့လိုတဲ့ အချိန်ပါ....။ ဒီလိုအချိန်ကြီးမှာ ကျွန်မလုံးဝမထင်မှတ်ထားတဲ့ မျှော်လင့်မထားတဲ့ Challenge နဲ့ ကျွန်မ Angel ရဲ့အစမ်းသပ်ကို ခံရတယ်...။ အတိုက်အခိုက်အနှောက်ယှက်တွေက လွတ်မြောက်ဖို့ Count Down လုပ်ထားရမယ်...။ ဒီရက်ပိုင်း ဘာပဲကြုံလာလာ အရာရာကိုမှန်ကန်သောနှလုံးသွင်းခြင်းနဲ့ သည်းခံခွင့်လွှတ်ပြီး ရင်ဆိုင်ကျော်လွှားမယ်ဆိုရင် စင်္ကြာဝဠာက ဆယ်ဆဆုတွေပေးတယ်လို့ တင်စားပြောထားကြတယ်...။
ရှုပ်ထွေးနေတဲ့ ချည်လုံးတစ်ခုကို အစရှာဖြည်ရတာ စိတ်အညစ်အကြေးအမှိုက်သရိုက်တွေကို ရှင်းထုတ်ရတာ စိတ်ပင်ပန်းရသလိုပဲ......
စေတန်အလှည့်ပြောင်း သုံးရက်မြှောက်မှာတော့ .....
“ Your own soul is your guru, quite the mind and listen to your higher self " တဲ့....Spiritual Friend ကနေတက်လာတာဟာ Angel က ကျွန်မကို ဒီမက်ဆေ့လေး အလင်းလာပြပေးခဲ့တာပဲ....။
သုံးရက်လုံး ခေါင်းထဲမှာ လေးလံစွာထမ်းထားရတဲ့ အရာတွေ ချက်ချင်းဆိုသလို ပေါ့ပါးလွင့်မျောသွားခဲ့တယ်...။
ကြည့်စမ်း... စေတန်ဟာ ကျွန်မကို အမှောင်ကမ္ဘာဆီလက်ဆွဲခေါ်ဖို့ ကြိုးစားနေတာပါလားလို့ သတိဝင်လာခဲ့တယ်...။ အလင်းရောင်ခြည်တချို့ ကျွန်မဆီ Sparkle ✨ ရောက်လာခဲ့တယ်...။ 👏 YES!!! This is my Angel ….
ကိုယ့်စိတ်ကိုယုံကြည်ဖို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုချစ်ဖို့ သတိအမြဲရှိနေဖို့ ပိုသိလာစေခဲ့လို့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် မိုင်အိန်ဂျယ်ရေ....။
18th Oct ဂျူပီတာအလှည့်ပြီးရင်တော့ ကောင်းတာလုပ်နေတဲ့ သူတွေ ကိုယ်နှုတ်နှလုံးထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်လာခဲ့တဲ့ သူတွေအားလုံးအတွက် ကောင်းတာတွေလာတော့မှာပါ....။ စိတ်တည်ငြိမ်ပြီး ကောင်းတာတွေကိုလည်း ပိုလုပ်လာချင်မယ်...။
မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတွေလည်း အမြင်မှန် လမ်းမှန်ရောက်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပါတယ်....။
ကြုံလို့တစ်ခုပြောချင်တာ wave တွေကိုပို့တဲ့အခါမှာ ပေးပို့သူနဲ့ လက်ခံသူဟာ စည်းချက်ညီနေမှ ရတာ...။ မဟုတ်ရင် မေတ္တာဓါတ်တွေကို Sender က ဘယ်လောက်ပို့ပေးပေး Receiver ကလက်မခံရင် သက်ရောက်မှုမရှိတော့ဘူး အဲလိုပဲ Sender ကိုယ်တိုင်ကလဲ မေတ္တာဓါတ်ပြည့်နေဖို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို အရင် မေတ္တာပို့ရတယ်....။ ကျွန်မ ပို့ပေးတဲ့ မိတ်ဆွေတွေထဲမှာ လက်ခံနိုင်စွမ်းအားနည်းတဲ့သူတွေ တချို့တွေ့ရတယ်....။ အထူးသဖြင့် သီလအားနည်းတဲ့သူတွေဖြစ်ကြတာ သိရတယ်...။
တရားထိုင်တိုင်း ဝတ်ဖြူစင်ကြယ်နဲ့ အမြဲအတူလာထိုင်တဲ့ ကျွန်မရဲ့(Plitchoke) အိန်ဂျယ်ကိုလည်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
🌟Spiritual Friend မှ အချက်လက်အများအတွက် လေးစားစွာ Credit ပေးပါတယ်....။
Posted by Cameron at 07:42 No comments: